Muxuu salka ku hayaa dagaalka ka dhacay Norrköping? | Somaliska
Habeen hore ayaa waxaa magaalada Norrköping ka dhacay dagaal balaaran oo dhex maray qoysas ka soo wada jeeda wadanka Syria. Dagaalka ayaa ka dhacay xaafada ay u badanyihiin soo galootiga ee Hageby kaasoo laysku adeegsaday hub iyo midiyo, iyadoo ay ka qeyb galeen 30 ilaa 40 qof.
Booliska ayaa xaalada ku tilmaamay mid gacanta ka baxday iyadoo markii ay meesha yimaadeen ay garan waayeen halkii ay wax ka bilaabi lahaayeen. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 2 nin oo walaalo ah oo da’dooda lagu sheegay 40 sano. Waxaa kale oo ku dhaawacmay 6 kale oo qaraabo ah. Booliska ayaa soo xiray 4 walaalo ah, kuwaasoo loo haysto dil iyo in laga badbaadiyo kuwa kale ee doonaya in ay khaarijiyaan iyaga.
Sheekada ayaa la sheegay in ay ka soo bilaabatay kaniisada horteeda maalintii jimcaha, iyadoo ragga qaar ay isugu hanjabeen hadalo ay ka midyihiin “kaalaya oo raganimadiina muujiya”. Booliska ayaa ku wareersan arinta, iyadoo dadka dhan ay ka wada tirsan yihiin labo qoys oo naceyb ka dhaxeeyo.
Dhacdadaan ayaa Swedishka ka yaabisay, iyadoo ay la yaabanyihiin sida qoysas dhan ay gacmaha iskula tageen oo nafta iska gooyeen. Ma ahan markii ugu horeysay ee dhacdooyin dil iyo qasaare kale ay ka dhacaan magaalada Norrköping balse dhacdadaan ayaa la sheegay in aysan wax xiriir ah la lahayn kuwii hore.
Wax nagama gelin, syria mise srilanka wexey yihinba. Aqbaar somalida quseyso soo qor saxib.
Arimaha dalka somalia. says:
Syria maxaa naga galay ma carab Ayaan nahay?..
Anagii ayaa wadenkeenu gubanayaa.
aan ujeesano danteena iyo dalkeena…
qofkaan xanuunsan ee magaca ka dhigtay Arimaha dalka somalia besetkan ma ahan kuwii siyaasada somalia looga hadli jiray kan waa mid laga helo aqbaarada gudaha sweden
Asc mamulka waba iyo Asxaabta carabta Maahan dad ciyaar ah ama qoslo waxan qabaa sweden waa ay ka badbaadayaan oo meeshii Refugee imaado waaba ka guurayaan carabta lkn ajaanibta kale oo ku jirto somalida iska jira dadkaas maahan dad Qoslo oo yurub wadan aysan hub ku heesan malahan ayaga iyo macalin hubkoodii beey sooo galeen yurub
nabadoon fowzi says:
WAA ARIN LAGA XUMAADO
Waa arin wanagsan hadii ay soomali. Dagal ka kasoo qaybgalin.
anaka waanka hormar sanahay carabta xunta oo dagalka kucusub oo ilaa 77 ila hada nagu fiirsaneeysa isbaheysiga galada xita islam nimo bil adim nimo iska daye kama anan helin waano iyo wacyigalin toona marka waala iska soodabo socdaa mid mid waan wada sugeeynaa waxaan uga hormarsanahay dagaalkeenu waadalka galada daneeyneeyso.mahane somali 40 vs 40 ugugu dagaali meeyno qurbaha jaceylkii dad nimo waa uu nagujiraa carabeey kusoo dhawada dagal iyo dibjirnimo